Programs प्रोग्रामहरू Windows, Linux र macOS c Emulator.online ▷ for को लागि बुट गर्न योग्य फ्ल्यास ड्राइभ सिर्जना गर्न
एक बुटेबल फ्ल्यास ड्राइव सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमहरू USB फ्लैश ड्राइभलाई बुटेबल डिस्कमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी उपकरणहरूले बढ्दो सीडी र डीभीडीहरू प्रतिस्थापन गर्दैछ, या त असफल प्रणालीबाट पुनः प्राप्त गर्न वा स्क्र्याचबाट स्थापना गर्न।
तलको सूचीले विन्डोज, म्याकोस, र लिनक्स वितरणको लागि सबै भन्दा राम्रो सफ्टवेयर ल्याउँछ। चेक आउट गर्नुहोस्!
प्लेब्याक / रुफस
पोर्तुगालीमा उपलब्ध, रुफस एक कार्यान्वयन योग्य फाईल हो जुन यसलाई प्रयोग गर्न तपाईंको पीसीमा स्थापना गर्न पनि आवश्यक पर्दैन। अनुप्रयोगले तपाईंलाई आईएसओ फाइलबाट स्थापना मिडिया सिर्जना गर्न बुटेबल फ्ल्यास ड्राइभ बनाउन अनुमति दिँदछ।
यो पनि सम्भव छ BIOS, फर्मवेयर वा कम स्तरको भाषामा प्रोग्राम अपडेट गर्ने माध्यम बनाउन। अनुप्रयोगसँग खराब क्षेत्रहरूका लागि फ्ल्यास ड्राइभ जाँच गर्न विकल्प पनि छ। विकासकर्ताहरूले ग्यारेन्टी गरे कि सफ्टवेयर मुख्य प्रतिस्पर्धी भन्दा दुई गुणा छिटो छ।
रुफस (नि: शुल्क): विन्डोज | लिनक्स
२. युनिभर्सल USB स्थापनाकर्ता
प्लेब्याक / पेन ड्राइव लिनक्स
युनिभर्सल USB स्थापनाकर्ता यसको प्रयोगको सरलताको लागि बाहिर खडा छ। केवल अपरेटिंग प्रणाली, आईएसओ फाइल, र USB स्टिक चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि जानुहोस् सिर्जना गर्नुहोस् र चाँडै कार्यक्रम न केवल प्रणाली स्थापनाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पुन: प्राप्ति ड्राइभको रूपमा पनि, सुरक्षा।
सफ्टवेयरले तपाईंलाई केही लिनक्स वितरणमा स्थिर भण्डारणको साथ बुट उपकरणहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। सुविधा तपाईंलाई प्रणाली सेटिंग्स र फाइल ब्याकअपमा पहुँच दिन्छ।
यदि तपाइँ विन्डोजको पोर्टेबल संस्करणको लागि यसलाई प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, पेनड्राइभ NTFS को रूपमा ढाँचा गरिएको हुनुपर्दछ र २० जीबी खाली ठाउँ हुनुपर्दछ। अन्य केसहरूमा, उपकरण पनि फ्याट १ or वा फ्याट as२ को रूपमा फरम्याट गर्न सकिन्छ।
युनिभर्सल USB स्थापनाकर्ता (नि: शुल्क): विन्डोज | लिनक्स
युनिभर्सल युएसबी स्थापनाकर्ताको रूपमा उस्तै विकासकर्ताबाट, YUMI एक बहुबुट स्थापनाकर्ताको रूपमा खडा छ। त्यसको मतलब के हो? यसले तपाईंलाई समान अपरेटि systems सिस्टम, फर्मवेयर, एन्टिभाइरस एकाइहरू र क्यामेराहरू भण्डार गर्दछ, समान संसाधनहरूमा अन्य संसाधनहरू बीच।
केवल अवरोध भनेको यी सबैलाई समायोजित गर्न उपकरणको क्षमता हो। अनुप्रयोगले लगातार भण्डारणको साथ पेनड्राइभ सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि प्रदान गर्दछ। यसको प्रयोग गर्न, यो फ्याट १,, फ्याट ,२, वा एनटीएफएसमा फर्म्याट हुनुपर्दछ।
युमी (नि: शुल्क): विन्डोज | लिनक्स | म्याक ओएस
Windows. विन्डोज USB / DVD उपकरण
प्लेब्याक / सफ्टोनिक
विन्डोज USB वा install स्थापना गर्न बूटयोग्य फ्ल्यास ड्राइभ बनाउनको लागि विन्डोज युएसबी / डीभीडी उपकरण माइक्रोसफ्टको आधिकारिक उपकरण हो। कार्यक्रमले तपाईंलाई आईएसओ फाइलको प्रतिलिपि बनाउन अनुमति दिनेछ, जसले सबै विन्डोज स्थापना वस्तुहरू एकसाथ ल्याउँदछ।
प्रयोग गर्न सजिलो, मात्र USB पोर्ट मा मिडिया ड्राइव घुसाउनुहोस्, आईएसओ छान्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् संगै हिड। त्यसो भए निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो बुट ड्राइभमा कुनै अतिरिक्त कार्यक्षमता वा अनुकूलन विकल्पहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्न भने, यो तपाईंको लागि आवेदन हुन सक्छ।
विन्डोज USB / DVD उपकरण (नि: शुल्क): विन्डोज १० र .7.१
प्लेब्याक / बालेना
ईचर यसको प्रयोगको सजिलोको लागि बाहिर खडा छ, जबकि यसको विभिन्न प्रणालीहरूसँग अनुकूलता छ। केही क्लिकको साथ, यसले तपाईंलाई फ्ल्यास ड्राइभलाई बुटेबल मिडियामा बदल्न अनुमति दिन्छ, चाहे यो विन्डोज, म्याकोस वा लिनक्स वितरणको लागि हो। यो क्षेत्र मा कम अनुभव संग मान्छे को लागी एक राम्रो विकल्प हो।
ईचर (नि: शुल्क, तर यसको सशुल्क संस्करण पनि छ): विन्डोज | म्याकोस | लिनक्स
प्लेब्याक / सॉफ्टपेडिया
WinSetupFromUSB ले तपाइँलाई XP बाट विन्डोज १० सम्म कुनै पनि विन्डोजको संस्करणको साथ बहुबुट फ्ल्यास ड्राइभहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। नाम माइक्रोसफ्ट प्रणालीमा केन्द्रित भएता पनि, कार्यक्रम लिनक्सको केही भेरियन्टसँग पनि उपयुक्त छ।
थप रूपमा, यसले सफ्टवेयर ड्राइवहरूको जगेडा विकल्प प्रदान गर्दछ, जस्तै एन्टिभाइरस, र विभिन्न निर्माताहरूबाट रिकभरी डिस्कहरू। यति धेरै कार्यहरू भए पनि, यो सहज र उपयोग गर्न मिल्ने ईन्टरफेसको लागि बाहिर खडा हुन्छ।
WinSetupFromUSB (नि: शुल्क): विन्डोज | लिनक्स
बुटेबल फ्ल्यास ड्राइभ के हो?
पहिले, यो सीडीहरू, DVD-ROM हरू, र फ्लपी डिस्कहरू बूटयोग्य मिडियाको रूपमा प्रयोग गर्न सामान्य थियो। आजका धेरै जसो कम्प्युटरहरूले यी मिडियालाई समर्थन गर्दैनन्, युएसबी स्टिक र एसडी कार्डले विकल्पहरूको साथ स्थान प्राप्त गर्दै छ।
अधिक पोर्टेबल हुनुको साथ, पेनड्राइभ पनि छिटो छ। यसलाई बुटेबल बनाएर, तपाईं यसलाई बाह्य ओएस स्थापनाकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बुट डिस्कमा स्थापना प्रोग्रामसँग पीसीको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ र अवस्थित प्रणाली अधिलेखन गर्न सक्दछ वा स्क्र्याचबाट नयाँ स्थापना गर्न सक्दछ।
यस उपकरणलाई रिकभरी डिस्कको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रणाली विफलताहरूको समाधान गर्न सक्षम। यस अवस्थामा, प्रणालीको एक धेरै हल्का संस्करण प्रयोग गरीन्छ, तर पर्याप्त ड्राइभहरू र संसाधनहरूको साथ समस्या समाधान गर्न वा कमसेकम महत्त्वपूर्ण डाटाको जगेडा गर्न सक्षम हुन।
उत्तम प्रोग्रामहरू CD, DVD र Blu-Ray जलाउन
गुगल क्रोम अफलाइन डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका
उत्तम एन्टीवायरस पीसी को लागी नि: शुल्क